Jona 2, 2018 Admin
Visa Outage any Eoropa manasongadina ny Potential ny Cryptocurrency vola
Teknolojia fandoavam-bola maneran-tany dia nanome mpanjifa amin'ny avo lenta ny tsy hanahirana. Raha tsy miasa teknolojia toy ny dokam-barotra, ny endri-javatra dia ho tena miteraka olana. Visa nijaly fahatapahan-jiro lehibe manerana an'i Eoropa noho ny ankamaroan 'ny andro zoma. Izany nanipika fa ilaina ny vahaolana hafa, ao anatin'izany ny vola ary na dia cryptocurrency.
Ny visa ho tsy fahombiazana any Eoropa
Mpanjifa sy ny raharaham-barotra manerana an'i Eoropa dia nanana olana lehibe tamin'ny Zoma fandoavam-bola. Na iza na iza miezaka hanao varotra amin'ny alalan'ny fandoavam-bola ny karatra Visa mety ho nanana olana. Varotra dia voafetra na tsy ho vita ny hamita. Andrim-panjakana ara-bola na dia nanoro hevitra ny mpanjifa mampiasa vola na zavatra hafa ny fandoavam-bola. Mastercard Tsy tratran'ny ity olana ity.
Visa dia haingana nilaza fa varotra an-tserasera efa nijaly loatra amin'io lafiny io. Point-of-fivarotana varotra sisa “voa sy malahelo” fa ny ankamaroan 'ny andro. Ny fampiasana ny contactless karatra ho an'ny varotra kely no azo atao amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Izany rehetra izany dia mampiseho ny fomba marefo ny rafitra ara-bola dia ny olana ara-teknika.
Events toy izany matetika no miteraka vokatra tsy nampoizina. ATM maro any Angletera no nampiasa ny vola ny tahirin ao amin'ny tolakandro. Raha ny olana dia tapa-kevitra, fanambarana ofisialy tsy nomena. Ny tsy hanahirana ny karatra fandoavam-bola ihany raha sarotra mihatra foto-drafitrasa izay mitarika ireo fandoavam-bola miasa araka ny tokony. Fa Visa, izay lavitra ny raharaha omaly.
Ny filàna sy ny vola cryptocurrency
Ny ankamaroan'ny mpanjifa Mbola manana vola misy toe-javatra toy izany hiatrika. Raha tsy fahombiazana toy izany dia tena tsy fahita firy, dia mety hitranga amin'ny fotoana rehetra. Noho izany dia tena inoana fa ho mandrakizay ny fanjifàna vola ho tanteraka mihena. Raha jerena avy amin'izany farany mishap, izany angamba no tsara indrindra.
Ankoatry ny, ny Visa olana hafa dia maneho fa ny fandoavam-bola dia midika koa ilaina. Tsy toy ny karatra sy ny vola karama, cryptocurrencies afaka mamonjy ny andro tamin'ny fotoana toy izany. Na dia eo aza ny volatility, fandoavam-bola maro processors misy ny hiatrehana cryptocurrency varotra na inona na inona vidiny maharitra fiovaovan'ny.
Mpanjifa sy ny orinasa mila mitandrina ny ireo safidy. Tena fomba tsara foana ny famatsiana vola tapaka ny tanana, nefa mbola mitaky karatra fandoavam-bola mety tsara mba hiala amin'ny ATM. Cryptocurrencies dia ny safidy, na amin'izao fotoana izao ireo no ekeko ihany vitsivitsy mpaninjara. Toy izany dia afaka manova haingana ny olana fa tsy taty aoriana.
$131M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Huobi crypto fifanakalozana mikasa Brezila fanitarana
Huobi, cryptocurrency fifanakalozana lehibe avy any Shina, ny fametrahana tsena any Brezila.
Nisy solontena avy amin'ny Huobi Group Nanamafy ny finiavana ny orinasa hiditra amin'ny tsena Breziliana.
Ny ezaka iray hafa no manamarika dingana Huobi ny drafitra ho an'ny Global fanitarana.
Next Post:Ethereum Wallet ImToken manana $ 35B in mipetraka, mihoatra ny 99% ny US banky